China SMS PP PP အရည်ပျော်သော Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Meiben
SMS PP အရည်ပျော်သော Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း
စက်မှုပစ္စည်းများတွင်အ ၀ တ်အစားမဟုတ်သောပိတ်ထည်များသည်မြင့်မားသော filtration စွမ်းရည်၊ insulation, heat insulation, အက်ဆစ်ခုခံမှု၊ ၎င်းတို့ကိုအများအားဖြင့် filter media, sound insulation, electrical insulation, packing, roofing နှင့် abrasive ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည်။
ဝဘ်သို့ 2. Fiber
ဖိုင်ဘာပိုက်ကွန်၏ 3. fixation
နေ့စဉ်သုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၎င်းကိုအ ၀ တ်အထည်များ၊ ကုလားကာများ၊ နံရံအလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ အနှီးများ၊ ခရီးသွားအိတ်များစသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များတွင်၎င်းကိုခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ လူနာဂါဝန်၊ မျက်နှာဖုံးများ၊ သန့်ရှင်းရေးခါးပတ်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် nonwovens များအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ကားအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ ထိုင်ခုံအဖုံးများ၊ မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အကာအရံများ၊ သစ်သားပြားများ၊ နေရောင်ခြည်များ၊ တံခါးအပျော့ပြားများ၊ တံခါးအဖုံးများ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းများအတွက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒစွမ်းအင်အတားအဆီးများ၊ ဘက်ထရီခွဲခြားသောအလွှာများ၊ အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ သံလိုက်ပြားအကာအကွယ်အလွှာများ၊ ကြမ်းခင်း၊ နံရံပစ္စည်းများ၊ ရထားလမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်းမများ၊ ရေကာတာများ၊ တူးမြောင်းများ၊ မြေဆီလွှာနှင့်ရေထိန်းသိမ်းရေးအလွှာများ၊ စသည်တို့
ကလေးအ ၀ တ်အစား၊ စက္ကူဘောင်းဘီ၊ အကာအကွယ်ပေးသည့်အ ၀ တ်အစား၊ ပခုံးများ၊ အခင်းများ၊ အလုပ်အ ၀ တ်များ၊ အိပ်ပျော်နေသောအိတ်များ၊ စောင်များ၊ ဆီးနှင်းကျည်များ၊ ခေါင်းအုံးများ၊
ကလေးအနှီးများ၊ အရွယ်ရောက်အနှီးများ၊ သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါများ၊ hemostats များ၊ ကလေးဘောင်းဘီများ၊ အလဲအရံများ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု ၀ တ်စုံများ၊ အဝတ်အစား၊ မျက်နှာမျက်နှာဖုံး၊ စိုစွတ်သောလက်သုတ်ပုဝါ၊ ဝါဂွမ်းဘောလုံး၊ ကော်အင်္ဂတေ၊
ကော်ဖီအိတ်များ၊ လက်ဖက်ရည်အဝတ်အထည်များ၊ အမှိုက်သရိုက်အိတ်များ၊ ထုပ်ပိုးအိတ်များ၊ စာရေးကိရိယာဆိုင်များ၊ စာရွက်ထုပ်များ၊ စာအိတ်များ၊ စာအိတ်များ၊ ကော်ဇောများ၊ ကော်ဇောနံရံများ၊ ဆိုဖာနံရံများ၊ အဝတ်စသည်တို့
အဓိကအားဖြင့်အတုသားရေ၊ အတုသားရေအခြေခံ၊ လျောက်ပတ်သောပစ္စည်းများ၊ အားဖြည့်ခြင်း၊ အတွင်းခံအင်္ကျီလက်များ၊ နောက်ကျောနံရံ၊ အလယ်နံရံ၊ စျေးဝယ်အိတ်များ၊ လက်ဆောင်အိတ်များ၊ လက်ကိုင်အိတ်များနှင့်ခရီးဆောင်အိတ်များစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုသည်။
6. အခြားအထူး Non- ယက်အထည်
အဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန်စစ်ထုတ်ပစ္စည်းများ၊ ပွန်းပဲ့ပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဥယျာဉ်၊ သားရေအတုနှင့်ပိုးမွေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ရှေ့သို့ SMS ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဂါဝန် SS Nonwoven အထည်စက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေး PP Spunbond Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နောက်တစ်ခု: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း SMS ခွဲစိတ်ကုသစာချုပ် SMS မဟုတ်သောအထည်အလိပ်စက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေး PP Spunbond Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှု Lin
အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း SMS ခွဲစိတ်ကုသစာချုပ် Nonwoven Fabri ...